Alahady faha-efatra amin’ny Karemy – 15/03/2015 – Toriteny – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Herinandro faha efatra (4) amin’y Karemy isika izao, efa miha atomotra ilay andro lehibe andrasantsika sy hiomanantsika fatratra ankehitriny, dia ny fitsanganan’I Jesoa ho velona.
Hamafisina amintsika hatrany fa io fitsanganan-ko velona io no fara-tampony amin’ny finoana kristianina. Matetika dia ny Noely na ny Pantekoty no tena manaitra ny olona, fa ny tena marina dia raha tsy nitsangan-ko velona i Kristy dia ho foana avokoa izay fety rehetra hankalazain’ny Fiangonana, ka izay no tsy maintsy hiomanana fatratra.
Mampianatra antsika ary ny fiangonana fa “Tia antsika Andriamanitra Ray”, asehony izany amin’ireo vakiteny telo vao norenasintsika androany, ao amin’ny evanjely izao no nanehoany amintsika izany fitiavany izany, dia ny “nanomezany ny zanany lahitokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay”.izany dia fanehoana ilay fitiavana fara-tampony omen’Andriamanitra amin’ny olombelona.
Teo ihany koa ny tantaran’I Nikodema, Farizianina mpampianatra ny lalàna izay mahay tsara ny soratra masina, izay nomarihin’i Masindahy Joany tsara fa nanantona an’I Jesoa tamin’ny andro alina,tsy tahaka ny olona rehetra , nefa I Jesoa dia mandeha manao fahagagana eny rehetra eny, midika izany fa na dia mpanora-dalàna sy mahafantatra tsara ny soratra masina aza i Nikodema dia mbola betsaka ny zavatra tsy fantany, ny hevitr’Andriamanitra dia maneho amintsika ny fa ilay alina nahatongavan’I Nikodema tao amin’I Jesoa dia satria ao anatin’ny haizina no hisongadinanan’ny hazavana . Rehefa avy nanazava ny momba azy tamin’i Nikodema I Jesoa dia nandroso ny resaka ka hoy izy “ Tahaka ny nanandrantana ny bibilava tany an’efitra no tsy maintsy hanandrantana ny zanak’olona koa” ary notohizany hoe “ Mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay”.
Mety hanontany ihany koa isika ny mikasika ilay bibilava nasandratra any an’efitra.
Ny evanjely dia manambara tsara amintsika fa rehefa niala tamin’ny fanandevozana tany Egypta ny zanak’Israely dia tsy maintsy nandalo efapolo (40) taona tany an’efitra, nanota ny olombelona, tsy nety nandray ny hafatr’Andriamanitra, niaina tao anatin’ny fahavetavetana, nimenomenona tamin’Andriamanitra izy ireo. Tezitra andriamanitra ka nandefasany an’i Nabokodonosora mpanjaka izy ireo handoro ny tanàna, namono ny olona ary nandefa izay sisa tsy maty ho babo tany Babilona.
Rehefa hitan’andriamanitra nefa izany fahoriana izany dia nirahiny indray I Cyrius Mpanjakan’I Persa, olona tsy mpino, mba ho tahaka ilay Mesia hanavotra ny vahoakan’Israely . Io ihany koa dia fanehoan’Andriamanitra ny fitiavany, fa rehefa nanota ny olombelona ka nofaizin’Andriamanitra nefa dia naveriny tamin’ny laoniny rehefa nahatsiaro nangirifiry .
Tao antin’io efapolo (40) taona io iany ny zanak’Israely dia , nihodina tanteraka tamin’Andiamanitra sy nanompo Andriamanin-kafa , ary nanao zanak’omby volamena nivavahana.nofaizin’Andriamanitra izy ireo tamin’izany ka nandefasany bibilava hanaikitra ireo vahoaka ireo, ka izay voakaikitra dia maty.Nahatsiaro nitodika tamin’Andriamanitr anefa ny zanak’Israely ka nitalaho tamin’I Moizy mba hivavaka sy hifona ho azy ireo.izay no nahatonga ilay vavak’I Moizy hoe “Nahoana no mirehitra amin’ny mpanomponao ny hatezaranao, ireto vahoakanao tsarovy fa navotanao ho foko harovanao”.
Naneho ny fitiavany indray Andriamanitra ka hoy izy tamin’i Abrahama: Manaova ianao bibilava varahana, hantony amin’ny hazo, ka izay rehetra voakaikitra ka mijery azy io dia ho sitrana.mandraka ankelitriny moa dia lasa marika amin’ny toeram-pitsaboana sy ny Dokotera izy io, izay midika hoe : raha marary ianao ka manantona ny toerana misy io famantarana io dia ho sitrana.
Toy izany ny hoe: Ny demony, naka ny endriky ny bibilava, ary naka fanahy an’I Eva, ray aman- dreny voalohany, ka isika olombelona lavon’ny fahotana .ka izay rehetra lavon’ny fahotana ka nanota ary miverina mijery ny hazofijaliana ka mitodika any amin’I Kristy dia ho sitrana satria , io no fanafody ho antsika , fa raha tsy izany dia maty maty foana I Kristy .
Tandindona ihany koa ilay niainan’I Abrahama izay efa feno 90 taona vao niteraka an’I Isaaka, nefa dia hoy Andriamanitra taminy : “ Ento atolory ,ataovy sorona ho ahy io zanakao tokana io”.Tsy nisalasala i Abrahama fa nentiny tany an-tendrombohitra ny zanany hanantanterahana ny sitrapon’Andriamanitra.Teo no nahatsapana ny halalin’ny finoan’i Abrahama.
Tsy misy manam-pitiavana lehibe noho izay mahafoy ny ainy ho an’ny sakaizany.
Rehefa tonga olombelona I Jesoa, dia naneho ny fitiavany antsika olombelona ka nanolotra ny ainy mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay.
Izay no antony hivavahantsika, hanantonantsika an’Andriamanitra, hanaovantsika ny asa fivalozana, fifadian-kanina mba ahazo ilay fiainan-tsambatra miaraka aminy.ny anjarantsika dia miezaka ny mamantatra izay fitiavan’Andriamanitra izay hoe “hatraiza”, misy ny hiombonantsika amin’ny olona rehetra, fa raha mandinika ny fiainantsika tsirairay isika dia mahatsapa izany, na dia ny mbola fahavelomantsika miriaria isan’andro dia efa fitiavana lehibe, satria ny olona mahatsapa fa tiana ihany no afaka mitia.Koa raha mahatsapa izany fitiavan’Andriamanitra izany ary isika dia afaka hitia azy ,eny fa na dia mpanota aza isika dia tia antsika ANDRIAMANITRA.